Translations < Burmese < Twenty Thirteen < GlotPress Translate WordPress.com
Translation of Twenty Thirteen: Burmese	Glossary
Filter ↓ • Sort ↓ • All (78) • Untranslated (10) • Waiting (0) • Fuzzy (2) • Warnings (0) • Current Filter (1)
The 2013 theme for WordPress takes us back to the blog, featuringafull range of post formats, each displayed beautifully in their own unique way. Design details abound, starting withavibrant color scheme and matching header images, beautiful typography and icons, andaflexible layout that looks great on any device, big or small.	 သီးသန့်ပုံစံတစ်ခုစီဖြင့် လှပနေသော စာမူပုံစံများ အပြည့်အစုံတစ်ခု အထူးထည့်သွင်းထားသော WordPress အတွက် ၂၀၁၃ အခင်းအကျင်းသည် ကွျနုပ်တို့အား ဘလော့ဂ်ဆီသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးထားသည်။ ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်တွင် မြူးမြူးကြွကြွ အရောင်အရောအစပ်နှင့် ကိုက်ညီသော ခေါင်းစီးရုပ်ပုံများ၊ လှပသော စာလုံးပုံစံများနှင့် သင်္ကတေပုံများ၊ ထို့ပြင် အကြီးအသေး ကိရိယာမျိုးစုံတို့တွင် အလွန်လှပသော ဒီဇိုင်းပုံစံချထားမှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။	 Details
သီးသန့်ပုံစံတစ်ခုစီဖြင့် လှပနေသော စာမူပုံစံများ အပြည့်အစုံတစ်ခု အထူးထည့်သွင်းထားသော WordPress အတွက် ၂၀၁၃ အခင်းအကျင်းသည် ကွျနုပ်တို့အား ဘလော့ဂ်ဆီသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်ပေးထားသည်။ ဒီဇိုင်းအသေးစိတ်တွင် မြူးမြူးကြွကြွ အရောင်အရောအစပ်နှင့် ကိုက်ညီသော ခေါင်းစီးရုပ်ပုံများ၊ လှပသော စာလုံးပုံစံများနှင့် သင်္ကတေပုံများ၊ ထို့ပြင် အကြီးအသေး ကိရိယာမျိုးစုံတို့တွင် အလွန်လှပသော ဒီဇိုင်းပုံစံချထားမှုများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
2014-09-05 08:33:51 GMT